PressReader - Ilanga: 2017-10-30 - USETHI KHUMU UKUHOLA I-IFP
USETHI KHUMU UKUHOLA I-IFP
Kufoloswe ngoMnu Hlabisa kwesokwengamela iqembu
ISITHATHA umhlalaphansi iNkosi Mangosuthu Buthelezi ekuholeni iNkatha Freedom Party (IFP), eyihole mhla isungulwa zingama-21 kuNdasa (March) we-1975.
Izolo ngeSonto, esigcawini sabezindaba ebesiseCoastland Hotel, eThekwini, kumenyezelwe iMeya yaKwaHlabisa, enyakathompumalanga yeKwaZulu-Natal, uMnu Velenkosini Hlabisa, njengomholi okumele avivele ukuthatha lesi sikhundla engqungqutheleni yaleli qembu ezayo.
INkosi Buthelezi - engomunye wabaholi abahlonishwayo emhlabeni - ithi zonke izinhlaka zeqembu zivumelene ngokuba uMnu Hlabisa nguyena okumele ahole iqembu emuva kwayo ngenxa yamagalelo akhe eNkatheni nokukhuthalela leli qembu.
Ithi kuyaziwa ukuthi yona sekukaningi ifuna ukuthatha umhlalaphansi kodwa bekumele ilungise konke kuqala eNkatheni ngaphambi kokuyophumula.
“Uma uNkulunkulu esangigcinile, ngizimisele ngokumsiza ngezinto zeqembu kodwa kangifu- ni kube sengathi yimina osaphethe. Umkhandlu wenhlangano kuzwelonke uvumelene ngomhlonishwa uHlabisa ngoba usebenze kakhulu ezinhlakeni zeqembu. Ngiyazi ukuthi abaningi bebelindele ukuba iNkosi Mzamo Buthelezi (iNkosi yaseMbongombongweni) kube yiyona ethatha izintambo kodwa iqembu libone uMnu Hlabisa kunguyena ofanelekile,” kusho iNkosi Buthelezi.
Ithi ngesikhathi iqhubeka nokuhola iNkatha ngowezi-2012, ibingazitsheli ukuthi kuzophela iminyaka eyisihlanu isayibambile ngoba ibingaphathekile. Itshele abezindaba ukuthi kusona sonke lesi sikhathi ibizitshela ukuthi iNkosi yaseMbongombongweni kukhona ezobe isikucoshile ngokwesipiliyoni sokuhola iqembu.
Icacise ukuthi kayisulile esikhundleni sokuba ngumengameli weIFP kodwa okhethweni olulandelayo, nguMnu Hlabisa ozobe ethwelwe ngeqoma kwesokwe- ngamela iqembu. Inkosi Buthelezi ithe ukuphakanyiswa kukaMnu Hlabisa kakusho ukuthi abafisa ukuncintisana nayo ngesikhathi sokhetho bayovinjwa.
"Umthethosisekelo weqembu uyavuma ukuba amagama aphakanyiswe ngosuku lokhetho," kusho uShenge.
UMnu Hlabisa uthi ukwamukelile ukuphakanyiswa kwakhe ngoba iqembu yilona elimbuke ngokumethemba ngenxa yeqhaza lakhe kulona.
Utshele ILANGA ukuthi kumethusile ukuqokwa kwakhe kodwa ngoba izinhlaka ze-IFP zibone ukuthi angakwazi ukuyisa phambili leli qembu nezwe, wavuma.
“Ngikwamukelile ukuphakanyiswa kwegama lami kwesokwengamela iqembu,” kusho uMnu Hlabisa.
Kawukho unyaka uMnu Hlabisa angakaze ahole ngawo abantu njengoba ejoyine iNkatha ngowezi-1978 kusagcotshwa namaziko. Ibe ngusihlalo we-IFP Youth Brigade (IFPYB) esiyingini saKwaHlabisa, usihlalo wesifunda, unobhala we-IFPYB kuzwelonke, unobhala we-IFP KwaZulu-Natal kusukela ngonyaka wezi-2011 kuze kube manje.
IMEYA yaKwaHlabisa, uMnu Velenkosini Hlabisa noMengameli weNkatha Freedom Party (IFP) iNkosi uMangosuthu Buthelezi.